Minnesota Operation Lifesaver, Inc. : Calaamadaha iyo Ishaarooyinka In English
Isgoysyada haywayada iyo jidadka tareenka waxa ay la mid yihiin isgoysyada caadiga ah, sida meelaha ay wadooyinu iska gooyaan. Isgoysyada qaar waxa ay leeyihiin calaamado u sheega in ay wadadu ay goyn doontu jid tareen. Isgoysyada jidadka tareenka ee aan lahayn nalalka waxaa loo yaqaan isgoysyo "aan shidmin" waayo malaha qalab daarmaya marka uu tareenku soo dhawyahay. Isgoysyada qaar ayaa waxay leeyihiin nalal big-big yiraahda, jaras (ama beel), ama qalab kale ee digniin ah marka uu tareen soo dhowyahay. Kuwaas waxaa loo yaqaan isgoysyada "shidma" sababta waxa ay leeyhiin qalab daarmaya marka uu tareenku soo dhawyahay si dhab ahna ugu diga darawlada iyo dadka lugta ah.
Calaamadaha aan shidmin ee aad arki kartid inta aadan soo gaarin isgoysyka
Calaamad Jaalle ah ee Wareegsan ee Usii-degidda . Tani waxa ay baabuur darawalada ooga digtaa in ay wadadu meel dhow ka goynayso jid tareen. Darawalada marka ay arkaan calaamaddaas waxa ay xusuusisaa in ay tartiib u socdaan, dhagaystaan, eegaanna tareen diyaarna u noqdaan in ay joogsadaan haddii tareen soo socdo.
Sidoo kale la soco calaamadaha ku qoran wadada laamiga ah ee u dhow calaamadda Jaallaha ah ee Wareegsan ee Usii-degidda, taas oo ayana xusuusisa in ay wadadu mar dhow goyn doonto jid tareen.
Wadooyinka laamiga ah, calaamad joogsiga ayaa ku qornaan karta meel si nabad ah ooga durugsan jidka. Halkaas istaag oo eeg tareen soo socda. Wadooyinka aan laamiga ahayn malaha calaamadahaas ama calaamadda dhulka ku qorran ee joogsiga. Sidaas darted wadahu waa in uu joogsadaa meel ka dambaysa calaamadda isgoyska (fiiri hoos) ama ishaarada isgoyska. Hadii ayna lahayn xariiq istaagid, waa in uu darawalku joogsadaa in u jirta tareenka ugu yaran 15 fiit iyo ugu badnaan 50 fiit ee jidka.
Calaamadda Jaallaha ah ee afar-geeska ah waxa ay sheegtaa isgoys hayway iyo jidadaka tareenka ee soo bixi doona marka aad midig ama bidix u leexatid.
Calaamdaha aan shidmin ee isgoysyada jidka tareenka
Calaamdda isku tallaabta ah ayaa looga baahnayahay isgoysyada oo dhan. Waxaa ay leeedahay labo sabuuradood ee cad-cad oo ay ku yaalan kalmadaha RAILROAD CROSSING (loolana jeedo isgoys tareen). Waana in loo tix galiyaa sida calaamadda YIELD (mudnaan sii kan kale). Waa in aad tareenka siisaa mudnaanta. Fiiri hoosta calaamadda isku tallaabta ah si aad u aragtid haddii ay jiraan calaamado kale ay sheegaya inta jid ee marta meesha. Haddii uu yahay hal jid ka badan, calaamaddaas ayaa ku ooli doonta. Marka uu hal tareen ku dhaafo, eeg oo dhagayso bal in wax tareeno ah ay ka soo socdaan dhanka kale.
Calaamadaha JOOGSIGA (STOP) iyo kuwa MUDNAAN SIINTA (YIELD) ee isgoysyadu waxa ay la micne yihiin kuwa kale ee isgoysyada caadiga ah ku yaal. Wadeyaashu waa in ay istaagaan meelaha JOOGSIGA ee ka horeeya jidadka tareenka, wade kastana waa in uu mudnaanta wadada siiyaa tareenka. Calamadaha DO NOT STOP ON TRACKS (HA ISTAAGIN WADADA DHEXDEEDA) waxay xusuusiyaan wadeyaaashu in aanan sina u joogsan jidka dhexdiisa.
Calaamadaha MEESHAAN HA DHAAFIN (NO TRESPASSING)
Calaamadaha MEESHAAN HA DHAAFIN (NO TRESPASSING) waxaa badanaa lagu dhajiyaa boondooyinka, tuneelada, waxyaabaha celiya boondada, mudnaaan lahaanshaha tareenada iyo goobaha tareenada. Meeshu ama ha la haato calaamadda "No Trespassing" ama yaanay lahaan, dadka ku socda jidadka tareenka iyo meelaha u dhow, boondooyinka ama tunneelada waa la xiri karaa waana la ganaaxi karaa. Xadgubidda meelahaas khatar ayay galin kartaa naftooda. Calaamadaha shidma ee isgoysyada tareenada
Nalalka digniinta ee gaduudka ah, oo ay la socdaan jarasyo (beelka) iyo albaabo, ayaa loo adeegsadaa digniinta darawalada iyo dadka lugta ah marka uu tareen soo dhowyahay. Waa sharci darro in lala wareego albaabka. Sidoo kale qalabka digniinta oo la iska indho tiro oo lala wareego albaabka, waxa ay wadaha sharci ahaan dusha ka saaraysaa wixii geeri, dhaawac ama dhib kale ah ay ka yimaada shil uu sababay. Isgoysyada leh calaamadaha shidma: 1) Joogso ee sug albaabku inta uu kaa furmayo 2) Joogso nalalka digniinta hadii ay big-big leeyihiin soco oo kaliya haddii uuna tareen muuqan. Xigasho: Howlgalka Naf-badbaadinta
Gudubka Jidka Tareenka
Xaqiiqooyin iyo Tirokoob (Mareykanka iyo Minnesota)